Akụkọ - mepụtara ihuenyo ọhụụ nke enwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị kọntaktị
azụlitewo ihuenyo ihuenyo nke enwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị kọntaktị
azụlitewo ihuenyo mmetụ na-enweghị kọntaktị nke nwere ike ịhụ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ, Naanị gbanye mkpịsị aka gị, Ọ dịghị mkpa imetụ ihuenyo ahụ aka. -spray partitions arụnyere na ndenye ọpụpụ counters na-echekwa. Ngosipụta Japan na-eme atụmatụ imeghe ahịa ọhụrụ maka ogwe LCD. 、
Ndị na-abụghị kpọtụrụ transperent "ikuku ihuenyo mmetụ"
Ihuenyo a bụ uzo dị ka iko iko mgbe ọ naghị agbanye ume, onyonyo ga-apụta mgbe ike gachara. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ akara ngosi gosipụtara na ihuenyo ahụ, Ma ọ bụ megharịa mkpịsị aka gị aka ekpe na aka nri ka ịpịgharịa na ihuenyo ahụ, rụọ ọrụ dịka ihuenyo mmetụ nke smartphone. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ ịghọta mgbanwe nke "ikike electrostatic" n'etiti mmadụ na panel. Mee mkpịsị aka gị n'ebe dị anya nke 5 cm site na ihuenyo ahụ, ihuenyo ahụ ga-aza.
Ngwa ikpe a egosiputara nke Japan gosiputara oge a bu sentimita 12.3.A na-eche echiche iji mee ihe ngosi ihuenyo mmetụ na akụkụ nke mgbochi mmiri. dịka ọmụmaatụ, a na-egosipụta nhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ na nkebi mgbochi mmiri nke edoziri na ndekọ ego nke ụlọ ahịa dị mma, Ma ọ bụ gosipụta koodu QR maka ịkwụ ụgwọ ekwentị. A na-atụ anya na ebe dịka ụlọ ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ nri na-achọ nlezianya idebe ihe ọcha ga-achọkwa ụdị mmetụ ihu na-enweghị ịkpọtụrụ.